သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အစိုးရမှရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ ကိုလှည့်ဖြားစော်ကားလျက်ရှိ … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အစိုးရမှရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ ကိုလှည့်ဖြားစော်ကားလျက်ရှိ …
ဘူးသီးတောင် ။ ။ မောင်းတောမြို့နယ်၊ ခ၀ါရ်ဘီလ် (ကျီးကန်းပြင်) အခြေစိုက်နယ် စပ်ဒေသ လူဝင်မှု ကွပ် ကဲရေးဌာနချုပ်(နစက)မှ ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်နိုင်ဦးနှင့်မောင်းတောခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်မင်းစိုးတို့သည် ၃၀-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့ “ဦးဥတ္တမ” ခန်းမ၌ အဆိုပြါ မို့နယ်မှ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ စာရေးများနှင့် ရပ်မိရပ်ဖ ၃၀၀ ခန့်ကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံ၍ နစက၏ “ဆွဲတင်စစ်” စစ်ဆင်ရေး ကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးသည့် အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို ကျင်းပ ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။
ထိုအစည်းအဝေးတွင် နစကကွပ်ကဲရေးမှူးက “ဘင်္ဂလီများ” များကို “ဆွဲတင်စစ်” စစ်ဆင်ရေး လုပ်တော့ မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကွန်ပြူတာပေါ်လက်ဗွေနှိပ်၍၌မှတ်တမ်းတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ်မှာ ဘင်္ဂလီဟုရေးထားသည့်အတိုင်း မှတ်တမ်းတင် မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နစက ဆိုသည်မှာ ဘင်္ဂလီထိန်းချုပ်ရေး ဌာနဖြစ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂလီရှိနေသရွေ့ ဤစစ်ဆင်ရေး လည်းရှိနေ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ဆင်ရေး စရိတ်ကို ဘင်္ဂလီများက ကျခံရ မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြား ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်မင်းစိုးမှ ဆက်လက် ၍မောင်းတောခရိုင်မှ ဘင်္ဂလီများအား ဘယ်သောအခါ မှနိုင်ငံသား အခွင့်အရေးကိုပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ အစစ်မခံလျှင်၊ ကလေးနှစ်ယောက် ထက် ပိုမွေး လျှင် ပြင်းထန်စွာအရေးယူ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ့်ကလေး ကိုယ်သတ်ပစ် ရမည့်အခြေအနေ သို့ရောက် အောင်လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့်စော်စော်ကား ကားခြိမ်းခြောက်ပြော ဆိုခဲ့ သည်။ “ရိုဟင်ဂျာ” များ အားအတင်းအဓမ္မ “ဘင်္ဂလီ”လုပ်ပစ်ရန် အာဏာ သုံးကြိုးပမ်း လာခြင်းဖြစ်သည်။
ယာယီကတ်ပြားနှင့် သုံးခေါက်ချိုး ကပ်ပြားများသည်မောင်းတောခရိုင်နေ ရိုဟင်ဂျာများ အတွက်နိုင် ငံခြား သား ကတ်များပမာဖြစ်သည်။
မောင်းတောခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဒေသခံမွတ်စလင်များ သည်နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်၍ အိမ်ပိုင် ဆိုင်ခွင့်၊ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း၊ ငွေကြေးတန်ဖိုးအားဖြင့် သိန်း ၅၀ ထက်ပို၍ ပိုင်ဆိုင် ခွင့်မရှိကြောင်း တို့ကိုထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူး နေရာတွင် ၀င်ရောက်၍ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်းကို လည်းပြောကြား ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင် ဒေသ ခံမွတ်စလင်များသည် မည်သည့်အခါမှ ရခိုင်လူမျိုးနှင့် တန်းတူရှိမည်မ ဟုတ် ဟုပြောကြား ခဲ့သည်။
“နစက”တပ်ကို အမျိုးသားရေးဝါဒီ စစ်ရာဇ၀တ်ကောင် ဗိုလ်ခင်ညွှန့်က ရိုဟင်ဂျာများအား အမဲဖျက်သလို ဖျက်ပြီးမျိုးသုဉ်းပစ်ရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းနစကအဖွဲ့၏ “ဆွဲတင်စစ်” စစ်ဆင်ရေးဆိုသည် မှာဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်ထားရန် လိုသည်ဟု ဆိုပြီး ရိုဟင်ဂျာများအားနှ စ်စဉ်စော်ကားသော၊ ရိုဟင်ဂျာ အတော် များ များကိုနှစ် စဉ်ကောက်ကျစ်စွာနိုင် ငံမဲ့ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်သော၊ ရိုဟင်ဂျာများထံမှ နစကဓားပြများ ကနှစ်စဉ်ကျပ်သန်း (၅၀၀၀) ခန့်ဓားပြတိုက်သောစစ်ဆင်ရေးဖြစ်သည်။ ယခုတစ်ကြိမ် တွင်ထိုရိုင်းပျစော် ကားမှုများအပြင် ရိုဟင်ဂျာများအား ကွန်ပျူတာဖြင့် လှည့်ကွက်ဆင်၍ ဘင်္ဂလီလူမျိုးဟု အတင်း ၀န်ခံခိုင်းသည့် အစီအစဉ်တစ်ခု အပိုပါရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
မောင်းတောခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်မင်းစိုးဆိုသူကား ၂၀၁၂ခုဖေဖော်ဝါရီလတွင် “ပစ္ဆိမရပ်ဝန်း” ကဲ့သို့ အစွန်းရောက်မဂ္ဂဇင်းကို ထုတ်ဝေ၍“၂၀၁၂ ခု ဇွန်၊အောက်တိုဘာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်ပွဲ” ကိုလှုံ့ဆော်ဖန်တီးခဲ့သည့်အစွန်းရောက် “တရားလွန်လူမျိုးရေးဝါဒီ၊ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ” တရားခံတစ်ဦးဖြစ်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် ကမ္ဘ့ာလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအား ရိုဟင်ဂျာများ ၏နိုင်ငံသားအခွင့် အရေးများ ကိုပေးပါမည်ဟုကတိပေးထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ထား ရှိသော ပေါ်လစီကို လုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေ။ မရိုးမသားကောက်ကျစ်စွာပင် “ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး သုဉ်းရေးပေါ် လစီ” ကို ယခင်ကထက်ပို၍ပင်အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ အကောင်အထည်ဖော် လျက်ရှိသည်။ ဤအတိုင်း ဆိုလျှင် များ မကြာမီတွင်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွား ဖွယ်ရှိနေသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများကို အစဉ်လှည့်ဖြားရန် ကြံစည်နေသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများက သူ့အပေါ်ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့လျက်ရှိသည်။
This entry was posted on December 31, 2012, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← RNDP ပါတီဧ။် သမိုင်းတွင်မည့် ဂုဏ်ဒြပ်များ
၂၀၁၂ ခုနှစ် မြန်မာမွတ်စလင်မ် သတင်း အနှစ်ချူပ် စုစည်းမှု့ (အပိုင်း-၁) →